Izibalo zabanesifo sikaShukela eNingizimu Afrika - South Africans with Diabetes
Kumele sikhulume ngendaba yokuba nesifo sikashukela okunzima ukuthi sitholakale ngenxa yokuthi asinalo inani elijwayelekile elitholakala emzimbeni womuntu onesifo sikashukela ojwayelekile. Uma kukhona into esifundise yona uKhuvethe ukuthi siyakwazi ukuthatha izinqumo ezinqala mayelana noshintsho uma isimo siphoqa ukuthi sishintshe. Siyizwe, iNingizimu Afrika kumele ibambisane ibe imbumba ukuvikela izimpilo zethu. Noma ikhuvethe ize nenselelo enkulu ngokukhulu ukuphuthuma lokhu kunganake muntu, isifo esilandelayo naso sithule kepha siyanyonyoba. Inselelo yethu elandelayo ilesifo esesilana vele, leso isifo sikashukela.
Umqedazwe wesifo sikashukela eNingizimu Afrika
Bheka umuntu osesandleni sakho sokunene kanye nokwesokudla ngenkathi uxhumana ngokomoya nge “Zoom call”. Uzothola ukuthi oyedwa kunina nobathathu unesifo sikashukela esibizwa nge “prediabetes”. Lokhu ngeke kubonakale ngokushesha njengombulalazwe uKhuvethe, ngoba phela futhi lesifo asiyena undaba mlonyeni kwezokuxhumana, kodwa ke naso sinobungozi obukhulu, okuhle nje ukuthi siyavikeleka. Ngokocwaningo olwenziwe kutholakale ukuthi isifo sikashukela isona esibulala kakhulu abantu besimame eNingizimu Afrika ngokusho kwabakwa Stats SA. Isifo sikashukela singaholela ekutheni umuntu angabe esabona emehlweni, anqunywe izitho zomzimba, Kanye nesifo senhliziyo. Kodwa ke lesifo asisiwona umnqamulajuqu uma nje wazi ngaso nokuthi unaso, ngoba phela kumele wenze izinguquko ezincane empilweni yakho ezizokusiza ukuze uphile isikhathi eside.
⅓ oyedwa kwabathathu usengcupheni yokuba nesifo sikashukela
Ingabe zithathwephi lezibalo? Abantu bazuzile ngokuba sohlwini lwalaba abahlolele inani likashukela emzimbeni mahhala ngenyanga kaLwezi ziyiShumi neShagalolunye. Kutholakale ukuthi abayinani lika 35% labo linoshukela omningi emzimbeni, lokhu okubabeka engcupheni yokukhungathwa ilesifiso. Kwase kutholakala ukuthi abayinani elingu 5% lona latholakala linalesifo sikashukela emva kocwaningo.
Ezishicilelwe kamuva South Africa Demographic and Health Survey 2016 ziveza ukuthi lezibalo zincane kakhulu. Zibika ukuthi inani labesimame liwu (64%) kanye nabesilisa bona abawu (66%) banesifso sikashukela “prediabetic” (adjusted HbA1c level of 5.7%-6.4%). “Lokhu kuveza ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi basengcupheni yokuba nalesifo sikashukela.”
Isifo sikaShukela Kanye noKhuvethe
Okwenza lokhu kuphuthume, ukuthi eqinisweni isifo sikashukela siyingozi kakhulu uma sesihlangene noKhuvethe. Siningi isibalo sabadlule emhlabeni abanesifo sikashukela, abanesifo somfutho wegazi ophezulu kanye nabakhuluphele ngokweqile ngokomzimba. Lokhu kusho ukuthi njengoba abantu abaningi benganalo nje ulwazi lokuthi banesifo sikashukela, basengcupheni enkulu yokutheleleka kuKhuvethe.
Ingabe yini isifo sikashukela “prediabetes”?
Inhlangano yezempilo yomhlaba World Health Organisation (WHO) ithatha inani likashukela elingaphansi kuka 5.5mmol/l njengele jwayelekile emzimbeni womuntu. Bese kuthi inani elisuka ku 7mmol/l nangaphezulu lona lithathwa ngokuthi lowomuntu usuke esenesifo sikashukela. Bese kuthi phakathi nalo lelonani kube abanesifo sikashukela “prediabetes” yona eku: 5.5 to 7mmol/l. Izindaba ezimnandi? Zithi uma unohlobo lwesifo sikashukela “prediabetes” usengakwazi ukuthi ushintshe ukudla okudlayo nendlela oziphethe ngayo okungehlisa amazinga kashukela emzimbeni wakho abe sesimeni esijwayelekile. Lokhu kuvimbela ukuthi ushukela ubhebhethekele kulesifo esibizwa ngo “Type 2 diabetes”. Kodwa ke uma wazi ukuthi unaso!
Ngabakwa WHO, 80% wabantu abanesifo sikashukela, kube 80% wabanesifo senhliziyo kanye no 40% wabanesifo somdlavuza bangizivikela ngokuthi bangalokothi babheme ugwayi, ngokuthi futhi baphinde bazivocavoce baphinde badle ngendlela elungele isimo samo. Yinto eyaziwa emazweni onke ukuthi ukuvikela ukuba nesifo sikashukela kwenziwa indlela oziphethe ngayo kanti ke futhi lokho kuyasiza kakhulu.
Ngabe yini lena, lesi isipho: Ukuthi umzimba ukwazise kusenesikhathi ukuthi udinga usizo ukuze ukwazi ukuvikeleka ezifweni ezingalapheki. Sizophinda sifake imininingwane ethe xaxa ngokuthi usishintshe kanjani isimo sakho sikashukela “prediabetes” ngesonto elilandelayo.
Zitholele ulwazi olwengeziwe mayelana nokuphila nesifo sikashukela ngokuthi uvakashele ikhasi lakwa Sweet Life ku www.sweetlife.org.za okanye ke Diabetic South Africans enkundleni yezokuxhumana Facebook.
Ngesikhathi senyanga yesifo sikashukela yezwelonke “During National Diabetes Month”, amakhemisi amaningi afana nezitolo zakwa Clicks, Dis-Chem kanye no AlphaPharm banikeze abantu ithuba lokuhlolela ushukela mahhala. Sibe sesikwazi ukuthola imniningwano kwabakwa Allegra, bona abakhe uhlu lwemniningwane ngezempilo oluphelele olusuka ezikhungweni zezempilo, lapho singabala khona izinkampani zomushwayilense, imtholampilo engamakhemisi, kanye nohlobo lwezempilo olubizwa “medical aid” kanye nabo uqobo abaphethwe isifo sikashukela njengoba bonke benobudlelwano abanabo.
Abakwa Allegra basinike amandla singabakwa Sweet Life Diabetes Community, ngokolwazi abanalo ukuthi sithole isithombe esiphelel ngokuthi isifo sikashukela sisabalele kangakanani eNingizimu Afrika. Lokhu kuyinkombandlela yokuthi singenza kanjani ukuthi sivikele siphinde sehlise izinkinga kanye nokukhokhela kakhulu imithi nemishanguzo kashukela. Lolulwazi lube seluhlaziywa ngabakwa Percept. Sibonile ukuthi kwabangu 16,477 kulaba ebekwenziwa ngabo ucwaningo, abangu 60% kubona batholakale benoshukela okahle emzimbeni, bese kuthi abangu 5% bakwisikalo sokuba nawo ushukela base kuthi abangu 35% noba kutholakale ukuthi banesifo sikashukela “prediabetes” ngokufunda imphumela yabo.